Calanka TV – 2016 – December
Sideeo looga soo dhaweeyay sanadka cusub 2017 waddamada New Zealand iyo Australia?: SAWIRRO
Wadamada Australia iyo New Zealand ayaa laga soo dhoweeyay sanadka cusub ee 2017, iyadoona dabaaldegyo waaweyn laga dhigay magaalooyinka caasimadda u ah waddamadaasi. Magaalooyinka Sydney iyo Auckland ayaa si weyn looga dareemay soo dhaweynta sanadka cusub ee 2017.
by calanka —	December 31, 2016 —	Sawirro
ISIS oo soo bandhigtay caruur aad u da`yar oo ay tababareen kuwaas oo wax xasuuqaya: SAWIRRO
Kooxda ISIS ee maamusha qeybo ka mid ah dalalka Suuriya iyo Ciraaq ayaa soo bandhigay cajal ay ku muujinayaan sida ay u tababaraan caruurta. Muuqaalkan ayaa waxaa ay caruurtani ku kacayaan xasuuq loo geysanayo maxaabiis, waxaa sidoo kale la barayaa qaabka dagaalka loogu tababarto.
by calanka —	December 30, 2016 —	Sawirro
17 jir si farsameysan uga qaaday bastoolad burcad dukaanka ugu soo galay oo dhacayay: VIDEO
Dhacdo ka dhacday gobolka New Jersey ee dalkaasi Mareykanka ayaa waxaa ay soo jiidatay indhaha caalamka kaddib markii warbaahintu ay baahisay muuqaalka wiil 17 jir ah oo burcad bastoolad ku hubeysan dukaanka ugu soo galay islamarkaana dhacayay. Wiilka ayaa bastooladda ka dafay burcadka.
by calanka —	December 30, 2016 —	Video
Maxaad kala socotaa xukunnada kala duwan ee laga fuliyo goobaha ay maamulaan kooxda ISIS? SAWIRRO
Goobaha ay ka maamulaan kooxda ISIS dalalka Ciraaq iyo Suuriya ayaa waxaa laga fuliyaa xukunno kala duwan oo shareecada Islaamka ah, waxaana muuqaaladan aad ku daawan doontaan xukunno isugu jira dilal, gacmogoyn, jar ka tuurid iyo wax la mid ah.
by calanka —	December 29, 2016 —	Sawirro
Diyaarad degi weysay dhowr jeer dabeylo xooggan darteed dalka Portugal: VIDEO
Garoonka jasiiradda Madeira Airport ee dalkaasi Portugal ayaa waxaa dhawaan ka dhci rabay shil diyaaradeed kaddib markii diyaarad rakaab ah oo siday shacay ay dowr jeer isku dayday in ay degto balse aysan u saamixin dabeylo xooggan darteed.
by calanka —	December 29, 2016 —	Video
MOSUL: ISIS oo shiish eber uga dhigay ciidamo dhufeysyo ku jira iyo jiho laga jiro oo ay garan waayeen: SAWIRRO
Dagaalka ka socda magaalada Mosul ayaa marba marka ka dambeysa galaya marxaladi dagaal oo kala duwan. Iminka kooxda ISIS ayaa bilowday xeelad cusub oo ay shiish kulabeegsabeyso ciidamada duullaanka kusoo qaaday magaalada Mosul.
by calanka —	December 28, 2016 —	Sawirro
Qaabka ay u dhacday dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee shalay Muqdisho ka dhacday: VIDEO
Waxaa shalay magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu dhaarinayay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka taas oo ka dhacday xarunta tababarka booliska ee Iskool Buliisiyo. Xildhibaanada la dhaariyay ayay tiradoodu aheyd 283 xubnood.
by calanka —	December 28, 2016 —	Video
Dhaarintii xildhibaanda labada aqal ee Muqdisho ka dhacday: SAWIRRO
SRI LANKA: Kaniisad ku khaldoontay miraha hees caay ah oo uu qoray 2Pac Shakur: VIDEO
Horaa waxaa loo yiri “Aqoon la`aani waa iftiin la`aan”. Kaniisad ku taal dalka Sri Lanka ayaa waxaa ay internetka ka daabacatay hees caay ah oo uu qoray heesaaga caanka ah balse iminka dhintay Tupac Shakur kaas oo uu dhinac shaaciro ah oo caay ah uga heesayay “Hail Mary” oo ah[Read More…]
by calanka —	December 27, 2016 —	Video
Wajiyada naftood-halligayaasha Ciraaq iyo qaabka ay u fuliyaan weerarka: SAWIRRO
Dalkaasi Ciraaq waxaa ka socda dagaal la isku adeegsanayo wax walba, xitaa in nafta si toos ah loo halligo. Xeeladaha dagaalka kooxda Daacish ayaa waxaa qeyb ka ah naf-hurnimo iyadoo gawaari laga buuxinayo walxaha qarxa dabadeedna lala abaarayo goobaha “cadowga”.
by calanka —	December 27, 2016 —	Sawirro